Apple က Macbook Air ကို 13in 2013 မော်ဒယ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - သတင်း Rule
Apple က Macbook Air ကို 13in 2013 မော်ဒယ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ပထမဦးဆုံးအချိန် Macbook Air ကိုဝယ်ယူမှုအတွက်ကောင်းသောသတင်းကိုသူတို့ထက်စျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်းမှာ Intel ရဲ့ Haswell အခြေစိုက်မော်ဒယ်ရတဲ့ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ် 2012 Macbook Air ကိုလက်တော့ပ်. သို့သော်, ပါးရည်နပ်ရည်ဝယ်လက် OS X ကို၏ Mavericks လွှတ်ပေးရန်ပြေးတစ်ဦး Macbook Air ကိုအပေါ်မိမိတို့လက်ကိုရဖို့ဆောင်းဦးရာသီသည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်လိုလိမ့်မည်
ကုန်ပစ္စည်း Macbook Air ကို 13in 2013 ပုံစံ
ဝက်ဘ်ဆိုက် Macbook Air ကို
အသေးစိတ်သတ်မှတ်ချက်များ 13.31440 အတွက်×900 LED Display ကို, Intel ရဲ့ Core i5 Dual-core 1.3GHz သို့မဟုတ် Core i7 Dual-core 1.7GHz Processor ကို, 4GB ကို RAM ကို, 128GB အထိသို့မဟုတ် 256GB SSD ပါ, 802.11ac /b/ g / n Wi-Fi သဟဇာတ, ဘလူးတုသ် 4.0, 2x ကို USB မှတ်3ဆိပ်ကမ်းများ, Thunderbolt port ကို, အဆင့် SDXC card slot, dual-မိုက်ခရိုဖုန်း, headphone jack, Magsafe2အာဏာကိုဆိပ်ကမ်း, အဓိကကျတဲ့ကဏ္ဍ 54Whr Li-ဖိုးဘက်ထရီ, 325x227x17mm, 1.35ကီလိုဂရမ်
မူရင်း Apple က Macbook Air ကိုပါးလွှာနဲ့အလင်းလက်တော့ပ်များအတွက်အခြေခံစံနှုန်းအဖြစ်သူ့ဟာသူတည်ထောင်ခဲ့သည်, နှင့် Intel Core ချစ်ပ်ရန်၎င်း၏အဆင့်မြှင့်နှင့်အတူ 2011 ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ချောမွေ့ပြောင်လက်ဒီဇိုင်းနှင့်တည်ဆောက်ကိုက်ညီဖို့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်တယ်.
Apple ကဇွန်လထဲမှာစတင်ကြောင်းနောက်ဆုံးပေါ် 13in မော်ဒယ်တော်တော်များများတူညီပြင်ပရက်နေ့တွင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ 2011 ထုတ်ဝေ, ဘေးဖယ်ဘယ်ဖက်ခြမ်းအပေါ်ကို dual မိုက်ခရိုဖုန်းများ၏ထို့အပြင်မှ. ဤအတောအတွင်း, OS X ကိုခြင်္သေ့ Mountain Lion ကို update လုပ်ထားပြီး – သငျသညျနောက်ဆုံးပေါ် Mavericks version ကိုပြေးတစ်ဦး Macbook Air ကိုကိုင်ရဖို့ဆောင်းဦးရာသီသည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်သော်လည်း – ဒါပေမဲ့ Apple ကစက်ထဲကပိုပြီးဖျော်ရည်ကိုရဖို့အပြောင်းအလဲတချို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ.
ကျနော်တို့ Apple ရဲ့ဘက်ထရီကတိတော်မျှော်လင့်ထားတက်အသက်ရှင်လျှင်ကြည့်ဖို့ RAM ကို 4GB နှင့်အတူ Macbook Air ကို Core i5 1.3GHz 13in မော်ဒယ်ထွက်ကြိုးစားနေခဲ့ကြရတယ်, Intel ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် Haswell Processor ကိုဗိသုကာပညာထက်အရင် Ivy Bridge နဲ့ Sandy Bridge ချစ်ပ်နေတဲ့ processor ကကူညီပေးခဲ့.
အဆိုပါ 13in Macbook Air ကိုအတော်လေးက၎င်း၏ 11 အနည်းငယ်သာမှေးခငျြးရဲ့အမွေး-အလင်းအထောက်အထားများမကိုက်ညီ, ဒါပေမယ့်နေဆဲအပါးလွှာဆုံးတဦးရဲ့ပတ်ပတ်လည်ပေါ့ပါးဆုံးလက်ပ်တော့, ၎င်း၏ flash ကိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းဖို့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကျေးဇူးတင်စကား.
ဒါဟာ 325x227x17mm တိုင်းတာနှင့်သာ 1.35kg အလေးချိန်, ထို 11 1.08kg မော်ဒယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ရုံ 300g အောက်မှာထည့်သွင်း, နှင့်အတိမ်အနက်ကိုအတွက် width နဲ့ 33mm ပဲ 25mm ခြင်းဖြင့်တိုးချဲ့. တောင်မှ ultrabooks ၏မြင့်တက်နှင့်အတူ Apple ကပထမဦးဆုံးတစ်ဦးလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကဒီ laptop ကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးကတည်းက, PC ကွန်ပျူတာထုတ်လုပ်သူအလေးချိန်နှင့်အရွယ်အစားချမောင်းထုတ်ရန်ရုန်းကန်ခဲ့ကြ, တစ်ဦးကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကုန်ကျစရိတ်မှာလျောက်ပတ်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းဆက်ထိန်းထားစဉ်.
အ 13in Macbook Air ကိုကပ်-ပါးလွှာသည်ကိုတောင်မှနှင့်ပေါ့ပါးသော, တည်ဆောက်ရညျအသှေးထိပျတနျးနှင့်အလွန်ကြံ့ခိုင်ဖြစ်ပါသည်, ထိုကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်း Laptop ကိုတစ်ကြော့မော့ပေးသည်စဉ်, High-end ကြည့်ရှု. Apple ကကောင်းစွာဒီ 13in မော်ဒယ်အချိုးချသော 79-key ကိုကျွန်း backlit ကီးဘုတ်ထည့်သွင်းခဲ့သည်, အတူ 12 function ကိုသော့များနှင့်တစ်ဦး User-friendly format နဲ့ထွက်ချထားလေးမြှား keys တွေကို. သော့တိုတောင်းတဲ့ခရီးသွားအကွာအဝေးရှိ, စာရိုက်ရသောအခါမှသာတစ်ဦးအလင်းထိတွေ့လိုအပ်အဓိပ္ပာယ်.
အ Macbook Air ကိုသူ့ရဲ့ Windows ကိုအခြေခံသည့် counterparts တွေကိုအများစုရဲ့ trackpad သည်ထက်ဘယ်မှာနောက်ထပ် key ကိုဧရိယာ. အဆိုပါ trackpad ကိုယ်တိုင်ကကြီးမားသောဖြစ်ပါသည်, အငြိမ့်ပွတ်ဆွဲခြင်းနှင့် pitching မူအယာများဖျော်ဖြေဖို့လုံလောက်တဲ့ထက်နှင့်ပိုပြီး, ကတက် scroll တစ်ဦးလေပြေအောင်, နှိမ့်ချခြင်းနှင့်မျက်နှာပြင်တဝိုက်. သို့သော်သတိပေးခဲ့သည်ခံရ – သင် trackpad မှအသုံးအများဆုံးရရှိပါသည်တခါ, သင်ကခက်ခဲကျောပုံမှန် mouse ကိုအတှေ့အကွုံမှအဆင့်နှိမ့်ဖို့ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်.
ဒါဟာသင်ကခငျြလမျး၌အလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့ trackpad လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်လွယ်ကူင်, တဦးတည်းအတွက်ရွေးချယ်စရာများနှင့်အတူ, နှစ်ဦးနှင့်သုံးလက်ညှိုးကိုကလစ်နှိပ်လိုက်, ညာဘက်ကလစ် နှိပ်., အဖြစ်ကိုကောင်းစွာတက်ဆွဲအဖြစ်ဒါမှမဟုတ် trackpad ချ. ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်တစ်ခုတည်းသောစစ်မှန်ဘက်ကိုအ trackpad glitchy ရနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ – လက်ျာ-click နှိပ်ပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူဥပမာ – သငျသညျအနှစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို၏စုံတွဲတစ်တွဲအဘို့သင့် Macbook Air ကိုဖူးတခါ.
နောက်တစ်ခု: ပြသ, ဆိပ်ကမ်းများ, သိုလှောင်မှုပမာဏ.
လမ်းကိုထွက်ရဖို့ပထမဦးဆုံးအကျဘက်ကိုဖြစ်ပါတယ်, ဝမ်းနည်းစွာ, Apple ကဆက်ပြောသည်မမူ Retina Display ပါ အ Macbook Air ကိုမှ. Retina ဖန်သားပြင် 2880 မှဖွင့်ဆက်ကပ်×1800 အ 15in Macbook Pro ကိုမော်ဒယ်များအပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်, အံ့သြဖွယ်အရောင်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်နှင့်ပိုမိုမျက်နှာပြင်အိမ်ခြံမြေပို့ဆောင်. သို့သော်, Retina ထည့်သွင်းအ Macbook Air ကိုဖွယ်ရှိဆက်ပြောသည်ကုန်ကျစရိတ်ရှိသည်နှင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းယုတ်လျော့မယ်လို့.
အ Macbook Air ကိုအပေါ် 13in Non-Retina မျက်နှာပြင်အခြားလက်တော့ပ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အဆင့်နှိမ့်မဖြစ်, သော်လည်း. ဒါဟာတစ်ဦးနဲ့ LED နောက်ခံအလင်းရှိပြီး 1440 ဦးရေအများဆုံး resolution နဲ့ကြွလာ×900, ထို 1366 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ×768 ထို 11 မော်ဒယ်အပေါ်အများဆုံး resolution ကို. သင်တို့သည်လည်းအလွယ်တကူသင့်လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်. ကြိုတင်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအကွာအဝေးမှဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်: 1280×800, 1152×720 နှင့် 1024×640 တစ်ဦးမှာ resolution ကို 16:10 အချိုး, သို့မဟုတ် 1024×768 800×600 တစ်ဦးမှာ resolution ကို 4:3 အချိုး.
အဆိုပါ display ကိုချွန်ထက်အရောင်အဆင်းနဲ့ရောင်ခြည်ကမ်းလှမ်း, ကျွန်တော်မြင်ကြပြီအများအပြား Laptop ကိုမော်ဒယ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအလွန်ရောင်ပြန်မဟုတ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်သင်ခွဲတောက်ပတဲ့နေရောင်ခြည်မှာနေမျက်နှာပြင်တောက်ပမရဦးမည်. အဆိုပါ display ကိုဗီဒီယိုကိုကြည့်သို့မဟုတ်ပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ဘို့အရည်အသွေးမြင့်မားသည်. ဒါကြောင့်အလိုအလြောကျကီးဘုတ်၏မျက်နှာပြင်နှင့်အလင်းရောင်၏အရောင်အဝါညှိအဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်အာရုံခံကိရိယာလည်းအလွန်ကြီးစွာသောထိတွေ့ဖြစ်ပါသည်, သင်တစ်ဦးမှောင်မိုက်တဲ့အခန်းအတွက် Macbook Air ကိုသုံးပါနှင့်နေဆဲအလွယ်တကူအားလုံးသော့နှင့်မျက်နှာပြင်တွေ့မြင်နိုင်သည်အဓိပ္ပာယ်.
ဇာတိဆက်သွယ်မှု၏စာရေးတစ်ဦး Laptop ကိုလိုအပ်နေမည်သူမဆိုတခြားနေရာတွေမှာကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်. အဆိုပါနီးပါးစက္ကူပါးလွှာတဲ့ကိုယ်ထည်ရိုးရိုးဆိပ်ကမ်းများ၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံအဘို့ခွင့်ပြုမထားဘူး.
အ 13in Macbook Air ကို၏လက်ဝဲဘက်ခြမ်းတွင်, သငျသညျတနျခိုး connector ကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်, တစ်ဦး USB port ကို, နားကြပ်ပေါက်နဲ့ dual-မိုက်ခရိုဖုန်း. audio အရည်အသွေးသည် Macbook Air ကိုအပေါ်လျောက်ပတ်သည်, သငျသညျရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်တီဗီကြည့်ဖို့ပုံမှန်အသုံးပြုသုံးပြီးအပေါ်စီစဉ်နေတာပါလျှင်ပေမဲ့, သို့မဟုတ် webconferencing များအတွက်, သငျသညျနားကြပ်တစ်ဦးအဆင်ပြေစုံတွဲအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသို့မဟုတ်အချို့သောအပိုပီကိုဝယ်ခြင်းငှါလည်းကောင်းချင်လိမ့်မယ်, အမြင့်ဆုံးအသံအတိုးအကျယ်ကိုအလွန်အသံကျယ်မဖြစ်သကဲ့သို့.
ညာဘက်တွင်, Apple ကဒုတိယက USB port ကိုပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်, တစ်ခုတည်း Thunderbolt connector ကိုတစ်ခုနှင့်အဆင့် SDXC card slot, တစ်ခုခု 11 မော်ဒယ်အပေါ်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်မဟုတ်.
အဆိုပါ Macbook Air ကိုသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့, ဒါကြောင့် optical drives တွေကိုတူ features နဲ့ပင်တစ်ဦးသည် Ethernet port ကိုခုတ်ရန်လိုအပ်သောင်. သို့သော်, Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုအပေါ်မှီခိုမပျော်ရွှင်သူတို့အဘို့, သင်က USB port ကိုသို့ plug တစ်ခု Ethernet adapter ယ်ယူနိုင်ပါသည်, ကျနော်တို့ Macbook Air ကိုသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်အတွင်းနေရာလေးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်သည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း.
အ Thunderbolt port ကို၏အများအပြင်အခြားသူများရဲ့မရှိခြင်းလျော့ပါးစေရန်လိုအပ်သောဆီသို့ဦးတည်အချို့သောလမ်းဝင်. မသာဆိပ်ကမ်းအထိဖြစ်ကြောင်းလွှဲပြောင်းအမြန်နှုန်းပေးပါဘူး 20 အစဉ်အလာကို USB ထက်အဆပိုမြန်, ဒါကြောင့်လည်း VGA နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အ Macbook Air ကိုခွင့်ပြု, HDMI, mini ကိုပြရန်ဆိပ်ကမ်းနှင့် DVI ထုတ်ကုန် Adapter ကနေတဆင့်.
ကံမကောင်းသဖြင့်, အာဏာ cable ကိုအ box ထဲမှာသည်သာ, အခြားအရာအားလုံးတစ်ဦး optional ကိုအပိုအဖြစ်ဝယ်ယူခံရဖို့လိုအပ်နေနှင့်အတူ.
ထို 11 Macbook Air ကိုလွှတ်ပေးမှု၏နောက်ဆုံးအသုတ်နှင့်အတူတစ်သိုလှောင်မှုကိုအဆင့်မြှင့်လက်ခံရရှိချိန်တွင် – အ 13in မော်ဒယ်များကိုအဆင့်မြှင့်တင်စာရင်းပယ်လွဲချော်ခဲ့သည်, လာမယ့်အတူတူ 128GB နှင့် 256GB ကို formats.
အခုအချိန်မှာအသစ်တစ်ခုကို Macbook Air ကိုဝယ်ခြင်းငှါထွက်အပြေးအလွှားတစ်ခုမှာဘက်ကိုနဲ့ Mac OS X ကိုအတူကသင်္ဘောများကြောင့် 10.8.4 Mountain Lion ကို, အ Mavericks OS ကို update ကိုဒီဆောင်းဦးရာသီမှထွက်ကြွလာသောအခါဒါကြောင့်သင်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်ဆပ်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်. Mavericks အများအပြားနေရာလေးကို features အသစ်ထည့်ပါလိမ့်မည်, အစားဖိုလ်ဒါထက် tags များသောအားဖြင့်ကယ်တင်တော်နိုင်စွမ်းနှင့်အုပ်စုဖိုင်တွေအပါအဝင်, နှင့်မျိုးစုံကိုမော်နီတာထောက်ခံမှု.
သို့သော်, Mountain Lion ကိုဆဲကောင်းစွာဒီဇိုင်းနှင့်အသုံးပြုသူ-friendly OS ကိုဖြစ်ပါတယ်, သူတို့ကပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ကို PC ကနေ switching ဆိုရင်၏ Hang ရဖို့နဲ့ Mac OS ကိုအချိန်အများကြီးအသစ်သူတို့အားယူမည်မဟုတ်. ဒီ Windows ကိုမှအဟောင်းတွေက Windows ဗားရှင်းကနေပြောင်းရွှေ့အသုံးပြုသူများအတွက်ကဆိုသည်မရနိုငျသောအရာတစ်ခုခုသည် 8, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွင်.
box ကို installation ကိုအထဲကပဲမိနစ်အနည်းငယ်ကြာ, နှင့်ရိုးရိုးနေသူများကဖန်တီးခံရဖို့တစ်ဦးနဲ့ Mac ID ကိုလိုအပ်ပါတယ်, အင်တာနက် configured ပြီးနောက်သင်ပယ်ပါတယ်. သင်တို့သည်လည်းအသစ်မော်ဒယ်ပေါ်သို့တစ်ဦးအဟောင်းတွေ Macbook ကနေအကြောင်းအရာပုံတူပွားနိုင်, အားလုံးသင့်ရဲ့ဖိုင်တွေနဲ့အကြိုက်ဆုံးရတဲ့၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပင်ချောမွေ့စေတော်မူမည်သည့်, ဤအ setup လုပ်ငန်းစဉ်ဖို့အချိန်ကိုထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်ပေမယ့်.
Mountain Lion ကို၎င်း၏နောင်တော်အတွက်မြင် Multi-touch နဲ့အမူအရာနှင့်အတူကပ်လျက်. အ trackpad အပေါ်အထက်သို့သုံးလက်ချောင်းပွတ်ဆွဲမစ်ရှင်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် activate, အရာအလိုအလျှောက်ငှက်ရဲ့မျက်စိအမြင်ရှိပရိုဂရမ်အားလုံးကိုဖော်ပြရန်မျက်နှာပြင်ပြန်စီ. မစ်ရှင်ထိန်းချုပ်ရေးအုပ်စုများအလားတူအစီအစဉ်များကိုအတူတကွဒါကြောင့်တိကျတဲ့ဝက်ဘ်စာမျက်နှာသို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းပွင့်လင်းပြတင်းပေါက်တစ်ဖောင်ထဲမှာအလွယ်တကူတွေ့နိုင်ပါသည်.
အပိုဆောင်း Multi-touch နဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုချဲ့ရန်ဖြစ်တော့လည်းပါဝင်သည်, အ trackpad သုံးပြီး apps များအကြား images နဲ့ပွတ်ဆွဲလှည်မှပေါင်းစွမ်းရည်ကို. ဝက်ဘ်ဆိုဒ်စာမျက်နှာအားအသုံးပြုတဲ့အခါ, ဒါကြောင့်ကျန်ရစ်နှင့်စာမကျြနှာအကြားနောက်ပြန်ကို Forward သွားကြဖို့ညာဘက်ကိုပွတ်ဆွဲအားလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်, အခြားသေးငယ်ပေမယ့်အချိန်-saving အင်္ဂါရပ်.
တစ်ဦးကို PC ပေါ်မှာမတူဘဲ, အသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးစာမျက်နှာနှင့်အပြန်အလှန်အပေါ်အောက်သို့ရွှေ့ဖို့ trackpad အပေါ်လက်ချောင်းနှစ်ချောင်းနှင့်အတူတက်ပွတ်ဆွဲရန်လိုအပ်သည်, ဒီရန်အသုံးပြုရတာရှည်ယူမပြုခဲ့ပေမယ့်.
Mountain Lion ကိုအတွက်ထူးဆန်းသောဖြည့်စွက်နေတဲ့ Notification Center ပါဝင်, screen ရဲ့ညာဘက်အခြမ်းအပေါ်ဒါမှမဟုတ် trackpad အပေါ် left ကနေညာဘက်ကိုလက်နှစ်ချောင်းကိုပွတ်ဆွဲခြင်းအားဖြင့်အသစ်ကဆက်ပြောသည်လိုဂိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဝင်ရောက်ထားတဲ့. အသိပေးချက်များ Center မှာသင်အပေါ်နဲ့ off on-screen သတိပေးချက်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်တဲ့ toggle ခလုတ်မြင်ရပါလိမ့်မယ်စဉ်တက်ဆင်းပြီး, သငျသညျဖန်စီတဲ့ pop-up ပူဖောင်းအားဖြင့်သင်တို့တစ်ဦးက Twitter အကြောင်းကြားစာသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ရတိုင်းအချိန်နှောင့်အယှက်မခံရဘူးလျှင်.
Apple ရဲ့ iCloud ကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ Mountain Lion ကိုသို့ပေါင်းစည်းဖြစ်ပါတယ်, လည်းတစ်ဦးကို iPhone, iPad ထွက်သည်ဖြာကြသူ, Mac ပိုင်ရှင်များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သတင်းအရာဖြစ်ပါသည်. သင်သည်သင်၏ Apple ID နှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်ပြီးတာနဲ့, iCloud သင်သည်ကောက်နှင့်သင်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်လိုသည့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါတယ်, မေးလ်အပါအဝင်, ဆက်သွယ်ရန်, ပြက္ခဒိန် & သတိပေးချက်များ, မှတ်စုများ, Safari က, Photo Stream နှင့်စာရွက်စာတမ်းများ. သင်သည်သင်၏ရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်ပြီးပြီပြီးတာနဲ့, Apple ကသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာနှင့်အပြန်အလှန်ပေါ်သို့သင့် iOS devices တွေကိုအထဲကဒေတာထပ်တူပြုခြင်းကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်.
အ Safari က browser ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းမှာတော့, Apple ကသူ့ရဲ့မတ်ရှာရန်လိပ်စာဘားတန်းနှင့်အစာရှောင်တင်ကြိမ်နှင့်အတူ Google က Chrome ကိုအတူတက်ဆိုတာပါပဲ. ၎င်း၏တိုးချဲ့တဲဘ်တပ်ထား browsing နဲ့ Multi-touch နဲ့အမူအရာပိုမိုလွယ်ကူအစဉ်အဆက်ထက်မျိုးစုံဝက်ဘ်ဆိုက်များမှတဆင့်တောက်ပါစေ, နှင့်၎င်း၏အသစ် “မျှဝေခြင်း” အင်္ဂါရပ်အခြားကောင်းတဲ့ထို့အပြင်ဖြစ်ပါသည်, တွစ်တာမှတဆင့် web page ဝေမျှဖို့အားဖွင့်သုံးစွဲသူများသည်, အီးမေးလ်သို့မဟုတ် iMessage. ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောတိုင်ကြားချက်ကို RSS ၏ဖယ်ရှားရေးကို web browser ကနေကျွေးမွေးသည်, နှင့်မေးလ် application ကိုမှ.
နောက်တစ်ခု: performance, ဘက်ထရီ.
နောက်ဆုံးပေါ် Macbook Air ကိုအတွက် Intel ရဲ့ Haswell ဗိသုကာ Core ချစ်ပ်ရန်အဆင့်မြှင့်သင်ယခင် Macbook Air ကိုမော်ဒယ်များအုပ်စိုးသိသာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်ပေးမည်မဟုတ်. ကျနော်တို့ကပုံမှန်အသုံးပြု 2011 Macbook Air ကို, နှင့်ဤနေ့စဉ်လုပ်ငန်းများကိုကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းထက်ပိုပါတယ်, နှင့် Adobe က Indesign တူသယံဇာတ hogging apps များပြေး.
ကျနော်တို့ 1600MHz DDR3 ကိုမှတ်ဉာဏ်၏ 4GB နှင့်အတူတစ်ဦးက Intel Haswell based Core i5 Dual-core 1.3GHz Processor ကို run နေနောက်ဆုံးပေါ် 13in မော်ဒယ်စမျးသပျ, သော Turbo နှင့်အတူတစ်ဦးက Intel Core i7 Dual-core 1.7GHz Processor ကိုအဆင့်မြှင့်နိုင်ပါသည် 3.3GHz အထိ Boost. ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းယန္တရားအဖြစ်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်များအတွက် Macbook Air ကိုအသုံးပြုခြင်း, ကျွန်တော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်အဟောင်းတွေမော်ဒယ်များနှင့်ဆင်တူခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရ. Applications ကိုဖွင့်လှစ်ရန်အလွန်လျင်မြန်များမှာ, ဝဘ် browsing ချောမွေ့မြန်ဆန်ဖြစ်ပါသည်, နှင့် OS X ကိုပတ်ပတ်လည်သွားလာရန်ရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူသည်. သို့သော်, ပုံမှန်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်တာနဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့သို့မဟုတ် CAD တူလေးလံသောတာဝန်အလုပျအတှကျ, ကျနော်တို့ Macbook Pro ကိုသို့မဟုတ် desktop ပေါ်မှာမော်ဒယ်အဘို့အသွားအကြံပေးချင်ပါတယ်.
Haswell ခြားနားချက်ဘက်ထရီသက်တမ်းသည်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီဘယ်မှာ. Apple ထုတ်ကုန်ပုံမှန်အားဖြင့်မြတ်သောဘက်ထရီသက်တမ်းနှင့်အတူ လာ. နောက်ဆုံးပေါ် Macbook Air ကိုဒီအပေါ်ကိုပင်ထပ်မံတိုးတက်ကောင်းမွန်, ထိုကဲ့သို့သောပေါ့ပါးတဲ့စက်ပစ္စည်းအတွက်အထူးသဖြင့်အထင်ကြီးစရာအရာဖြစ်ပါသည်.
Apple ကမှတက်ကိုးကား 12 ကြိုးမဲ့က်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ခွင့်နာရီ, သို့မဟုတ် 10 ၎င်း၏ built-in အနေ 13in Macbook Air ကိုများအတွက် iTunes ကရုပ်ရှင်ပြန်ဖွင့်နာရီ, 54WHR lithium-polymer battery. ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှန်ကန်-ကမ္ဘာစမ်းသပ်မှုများတွင်, ကျနော်တို့ဘက်ထရီသက်တမ်းနှင့်အတူတော်တော်ပျော်သွားတယ်, အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ 2011 11မော်ဒယ်အတွက်. စွမ်းအင် default သတ်မှတ်ထား setting များကိုအော်တိုအရောင်သည် adjust နှင့်အတူ, ကျနော်တို့ 13in မော်ဒယ်ထဲကတစ်ဦးအပြည့်အဝရှစ်နာရီရရှိရန်စီမံခန့်ခွဲ, အိပ်ထဲမှာနှစ်ဦးသီးခြား 30-မိနစ်ကာလအပါအဝင်.
ဒီအတော်လေး၏ heady ဝဂ်မရောက်ရှိစေခြင်းငှါ, 12 Apple ကကိုးကားအဖြစ်နာရီ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့တော်တော်တောက်ပအခြေအနေများအတွက်ကို dual monitor format ကိုအတွက် Macbook Air ကိုပြေးကြ၏, နေ့တစ်လျှောက်လုံးမျိုးစုံ applications များ၏အကွာအဝေးပြေး. ထိုသုံးနာရီကျွန်တော်တို့ရဲ့ 11 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ 2011 Macbook Air ကိုစီမံခန့်ခွဲ, ရှစ်နာရီချမ်းသာသည်.
ဆက်သွယ်မှုန့်အသတ်ရှိနေသော်လည်း, ဒီဇိုင်းနှင့်ကုန်ကြမ်းအာဏာကို Apple ကအသုံးပြုသူများကိုသို့မဟုတ် Windows ကနေပြောင်းလဲမှုကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်တစ်ဦးကျိုးနပ်ဝယ်ယူအ ​​Macbook Air ကိုလုပ်. သငျသညျနေ့ကသုံးစွဲမှုရန်သင့်အားယေဘုယျနေ့အဘို့လိုပါလိမ့်မယ်ဆို applications တွေကို run နိုင်ပါတယ်, နှင့် trackpad နဲ့ Mac OS X ကိုအသုံးပွုဖို့တစ်အပျော်အပါးကို Macbook Air ကိုလုပ်.
ပထမဦးဆုံးအချိန် Macbook Air ကိုဝယ်ယူမှုအတွက်ကောင်းသောသတင်းကိုသူတို့ထက်စျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်းမှာ Intel ရဲ့ Haswell အခြေစိုက်မော်ဒယ်ရတဲ့ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ် 2012 Macbook Air ကိုလက်တော့ပ်. သို့သော်, ပါးရည်နပ်ရည်ဝယ်လက် OS X ကို၏ Mavericks လွှတ်ပေးရန်ပြေးတစ်ဦး Macbook Air ကိုအပေါ်မိမိတို့လက်ကိုရဖို့ဆောင်းဦးရာသီသည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်လိုလိမ့်မည်. မီတာ
ပေါ့ပါးတဲ့, slimline ဒီဇိုင်း, အလွန်ကြီးစွာသောဘက်ထရီသက်တမ်း, တတ်နိုင်စျေးနှုန်း.
Mavericks ဘို့စောင့်ဆိုင်းနေ, အဘယ်သူမျှမ Retina Display ပါ.
Repost အားဖြင့်အပိုဒ်အရင်းအမြစ်: http://www.theinquirer.net/inquirer/review/2291318/macbook-air-13in-2013-model-review
13Macbook Air ကိုအတွက်, ပန်းသီး, Haswell, Intel က, Intel Core, Macbook Air ကို, Thunderbolt (interface), ဝိုင်ဖိုင်
← Earthwise TC70001 လျှပ်စစ်စွမ်းအားဒါကိုစိုက်ပျိုးမှုကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း အဆိုပါ RMS အ Titanic ၏တစ်ဦးကအရောင် Story →